KE YINTONI LE 'CHAOS MAGIC?' - UMLINGO
Ke yintoni i-Chaos Magic?
Ekupheleni kwekota yokugqibela yeveki yokugqibela Umbono weWandaVision, Igqwirha likaKathryn Hahn, u-Agatha Harkness, wenza isibhengezo esibuhlungu sokuba amandla ka-Wanda Maximoff ayengumlingo wesiphithiphithi. Oko kuyavakala… kuyothusa. Olu ayilo thotho lokuqala lokusasaza ukukhankanya isiphithiphithi ngokunxulumene nomfazi onamandla omlingo nokuba. Umbono wokubopha wawusembindini weengcali zobugqi kwiNetflix's Witcher .
Makhe sithethe ngomlingo wesiphithiphithi: ngaba ikho kwiicomic zeMarvel? Inokuthetha ntoni eWanda ukuya phambili? Kwaye yeyona nto inomdla kwintliziyo yam yobugqwirha: ubugqi bokwenene buquka ntoni? Kuba, ewe, yinto.
Kodwa makhe sijonge ezihlekisayo kuqala. Umlingo wesiphithiphithi yinto ekudala ikho kwiincwadi zeMarvel comic, kwaye ukumba kuloo nto, kuyacaca ukuba kutheni uAgatha esoyika ngayo. Ngokwe- Marvel fan wiki : Isiphithiphithi sobugqi ligama lomlingo onamandla kangangokuba bekucingelwa ukuba awukho kwaSorrer's Supreme ngokwakhe. Lo bugqi bunokukhohlisa, bujijise, kwaye buze bube yinto yokwenene yobukho kunye nenyani kwiminqweno yomsebenzisi, kwaye buzise intshabalalo epheleleyo kwindalo iphela.
Oko kuvakala ngokuchanekileyo njengale nto ibiyiyo iWanda kwaye kananjalo, iyothusa kakhulu loo nto ngokutshabalalisa yonke into yezulu.
Ke ivela phi le nto? Kwi-Marvel lore, yayiyimvelaphi yothixo wakudala obizwa ngokuba nguChthon owagxothwa liqela labathakathi kudala waya entabeni, Intaba yeWundagore (kufuneka ndiwathande loo magama ahlekisayo), apho kwiinkulungwane kamva, uWanda Maximoff wazalwa kwaye wachukumiseka yiyo. Isiphithiphithi somlingo i-anthesisi yohlobo lomlingo o-odolwe abantu abanjengoGqirha Strange kwaye kubonakala ngathi, Agatha Harkness, ukuziqhelanisa. Akukho mfuneko yokutsalwa okanye ukuloba okuntsonkothileyo, kuyenzeka nje, kulungile, ngomsindo.
Zininzi, kwaye ndiyathetha, amaqashiso Izinto ezihlekisayo malunga neWanda zisebenzisa amandla esiphithiphithi ngeendlela ezikhulu, ngelo xesha wacima uninzi lwezinto eziguqukayo kubukho. Kodwa kukho izinto ezinokubaluleka kakhulu kwiWandaVision. U-God Chthon usekude kancinci kwaye iziphithiphithi zakhe ziyafumaneka kwincwadi ebizwa ngokuba yiDarkhold. Ewe, le sele isetyenzisiwe kwiiAgents ze-S.H.I.E.L.D., kodwa isenokuba kukudibana nencwadi ekhazimlayo esiyibone kwigumbi elingaphantsi lika-Agatha. (Inyani emnandi: yaqulunqwa nguMorgan Le Fay. Ewe, ngumArthurian). Le ncwadi isetyenziselwe ukwenza uninzi lwezilo ngendlela, njengee-vampires, ezinokubopha Umbono weWandaVision kwikamva Umtya bhanyabhanya, kwaye siyazi ukuba iWanda ubuncinci iya kuqhubeka iye kummandla wobugqi ngokubonakala kokuzayo Ugqirha Strange kwi-Multiverse of Madness .
Ngoku, igama likaChthon lisikhumbuza ngoCthulu (njengoLovecraft) kunye noChthonic (wabaphantsi). Yonke le nto isiphithiphithi-kwaye inyani yokuba Ugqirha Strange 2 uya kubizwa ngokuba yiMultverse of Madness kwinto ebonakala ngathi ibhekisa kwiLovecraft's Kwiintaba Zobudenge— yenza ukuba kunokwenzeka ukuba uChthon kunye nabanye oothixo abadala bangafika kwi-MCU kwaye ukuba bonke obu bugqi kunye nokunye kuya kuqala ukukrazula imingxunya kwiindawo ezininzi. Ukonwaba? Ndiyathemba nje ukuba iWanda ihlala ingumlingiswa ontsonkothileyo kwaye ayincitshiswanga ukuba ibe sisikhohlakali okanye inqanawa yeChthon.
Kodwa uthini ngombono weyona chaos magick (ipelwe nge k ukwahlulahlula kwinto yeencwadi ezihlekisayo)? Uninzi lwezinto zobugqi eMarvel, ukusuka kuguqulelo lwabo baseSalem ukuya eDarkhold, isekwe ngakumbi kwiingcinga ezinde malunga nomlingo, nangaphantsi kwazo naziphi na izinto ezenziwayo (nangona unyana kaWanda uBilly wasebenzisa yonke inkolo ngegama lakhe eliphambili, uWiccan, ke zikhona iimpembelelo eziqinileyo).
Isiphithiphithi Magick yinto, nangona asiyomfihlo yakudala. Ngokufana nakwincwadi yehlaya, kwinyani yethu yokwenyani, kukho umlingo wobugqi onemithetho emininzi, ubuchule, kunye nezinto zeesoteric. Ugqirha UAustin Osman Spare Ndifuna ukwenza izinto zifikeleleke ngakumbi kwaye zijolise kwiziphumo nakwizinto ezinamandla ezizelwe zizinto, uhlobo lokushenxisa kwimithetho. Ke, wavelisa umbono we Chaos Magick. Oku kwenzeka ngeminyaka yoo-1960.
Ngoku, ukuqaliswa komlingo wesiphithiphithi kwi-Marvel canon yeza, ngokokwazi kwam, kwi-90s okanye njalo… kubonakala ngathi ewe, bekukho impembelelo ecacileyo evela kubugqi bokwenyani behlabathi kwimidlalo yamahlaya. Kodwa ukuba unomdla ngakumbi malunga ne-chaos magick, ndingacebisa ujonge ividiyo kuyo ukusuka kuthotho lweDa'at Darling yeChannel ye-YouTube ye-Occult 101 .
Isiphithiphithi Magick kwihlabathi lokwenyani siqulathe umxholo wokucinga ube yinyani, o… uvakala ngathi Umbono weWandaVision . Iingcali ze-magick zale mihla ziyisebenzisela izinto ezinje ngokufumana umsebenzi omtsha okanye ukukhuselwa ekhaya, hayi ukuxhokonxa idolophu iphela, ukuyiguqula ibe yi-sitcom, nokwenza amawele omlingo ngaphandle komoya omncinci. Okwangoku, kupholile kakhulu ukubona imbewu yezi ngcinga zobugqi zisuselwa kwinyani.
Inkqubo ye- Witcher Iincwadi, ngasendleleni, zabhalwa nakwi-90s emva kokuba umsebenzi we-chaos wemagical waba nefuthe, ke ndingacinga ukuba ikhona impembelelo nakhona. Kwaye iyavakala ukuba le ngcamango ibambelele kwiintsomi, kuba ngendlela enomdla. Umbono ophakathi kwisiphithiphithi magick kukuba yinkolelo edala amandla, kwaye yona ngokwayo ingumbono onamandla. Ndicinga ukuba omnye unokuthi ngayo: uyintoni umlingo ukuba ayizukuqhubeka inkolelo?
(umfanekiso: Disney / Marvel)
neodymium umazibuthe kumbhobho wobhedu
umzingeli x umzingeli uncuthu lwengoma
Kutheni le nto ingakhuli iinwele
umtoli bob's burgers crossover episode
UPaul ryan ukhathalelo lwezinto ezinokufikeleleka
ukugoba kutheni betshayela